Frontier Heroes bụ egwuregwu mkpanaka na-atọ ụtọ ma na-emikpu nke enwere ike ibudata kpamkpam nefu. Nezie, Frontier Heroes abụghị egwuregwu kwụ ọtọ; Ọ bụ ngwugwu nwere ọtụtụ egwuregwu. Frontier Heroes, nke nwere ihe karịrị egwuregwu 20, lekwasịrị anya na akụkọ ntolite America. Iji kọwaa nke ọma, obere egwuregwu niile na-akọwa oge akụkọ...
Joy Flight bụ egwuregwu na-atọ ụtọ ma na-atọ ụtọ ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ngwaọrụ gam akporo gị kpamkpam nefu. Ndị na-egwu egwuregwu afọ niile nwere ike ịnụ ụtọ igwu egwuregwu ahụ, ebe omume, njem na nka na-agbakọta ọnụ iji mepụta ụdị dị iche. Dị ka atụmatụ nke egwuregwu ahụ si kwuo, nke ụmụ anụmanụ mara mma na-apụta dị ka ndị...
Egwuregwu Super Hexagon abụrụla ihe ọhụrụ nụdị egwuregwu nka nke ngwaọrụ mkpanaka kemgbe afọ 2. Agbanyeghị, nihi na a na-akwụ ya ụgwọ, egwuregwu a enweghị ike nweta ihe ịga nke ọma zuru oke na Turkey. Ya mere gịnị ma ị nwaa usoro ọzọ efu? Spinner bụ ezigbo ihe atụ nwere ike imechi oghere a. Na egwuregwu gara aga, ị na-egwu dị ka ihe...
Skyward, ebe ị na-agagharị na ntụgharị nke diski abụọ nke agba dị iche iche, dị ka ihe nlele abụọ, bụ egwuregwu nke nkà. Tinyere eserese na-echetara nke Ndagwurugwu Ncheta, ị na-agbalị ịga nihu nihe owuwu yiri ihe owuwu 3D nke egwuregwu ahụ e kwuru nelu. Ihe ị ga - eme dị nnọọ mfe: ị ga-pịa ihuenyo mgbe ị na-ese nelu ya maka otu nime...
Egwuregwu Ping Pong bụ egwuregwu bọọlụ. Egwuregwu ndị a, nke anyị na-egwu na tebụl na arcades na ụlọ egwuregwu, na-etinye ọtụtụ ntụrụndụ na ndị enyi anyị ma nwee ahụmahụ asọmpi ruo ọgwụgwụ, dị ugbu a na ngwaọrụ mkpanaka anyị. Ping Pong abụghị egwuregwu tenis ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Kama, ọ bụ egwuregwu...
Tank 1990 Free bụ egwuregwu retro nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke anyị na-egwuri ugboro ugboro nọgbọ egwuregwu anyị, na nke ugbu a anyị na ndị enyi anyị, ọ bụghị dị ka ndị na-asọ mpi, kama dị ka ndị mmekọ. Ọ bụrụ na ị na-echeta na egwuregwu ahụ, ị ​​na-agbalị ichebe ugo dị ka...
Pigs Cant Fly bụ egwuregwu na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Ị nwere ike inwe anụrị na egwuregwu a ebe ị ga-enyere ndị piggy mara mma aka ịgbapụ na hel. Ezi ezi mara mma ma mara mma, bụ onye dabara na hel nihi ihe ọjọọ, na-agbalị ịgbapụ ebe a site nimeri ọtụtụ ihe e kere eke dị ize ndụ na ihe...
Bounders World bụ onye ndoro-ndoro ka ọ bụrụ ọkacha mmasị nke ndị na-achọ egwuregwu nka immersive igwu egwu na ngwaọrụ gam akporo ha. Ebumnuche anyị bụ isi na egwuregwu a, nke anyị nwere ike igwu na mbadamba na smartphones anyị nenweghị nsogbu ọ bụla, bụ iburu bọọlụ tenis nke enyere anyị njikwa site na mmalite ruo nisi njedebe. Nke a...
2 Player Reactor bụ ngwa ngwugwu nwere egwuregwu dị iche iche ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ngwaọrụ gam akporo gị kpamkpam nefu. Egwuregwu ahụ, nke gụnyere egwuregwu ndị ị nwere ike igwu egwu na mmadụ abụọ na otu ngwaọrụ, na-adọrọ mmasị na eziokwu ahụ bụ na ebudatara ya ihe karịrị ugboro 10. Ọ bụrụ na ị naghị enwe njikọ ịntanetị mgbe...
Ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu nka na-eri ahụ nke ị nwere ike igwu na mbadamba gam akporo gị na smartphones, The Boomerang Trail nwere ike ịbụ egwuregwu ị na-achọ. Egwuregwu ahụ, nke na-adọta uche na nhazi ya dị ntakịrị, nwere isiokwu na-adọrọ mmasị. Ebumnuche anyị na okporo ụzọ Boomerang bụ ịnakọta isi ihe ndị gbasasịrị na ngalaba...
Baunce bụ egwuregwu nka na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Site nime obere egwuregwu na aha ahụ, ha mere okwu ahụ bounce, nke pụtara ịwụ elu. Yabụ, dịka ị nwere ike ịghọta site na aha ahụ, egwuregwu ahụ bụ egwuregwu ịwụ elu dabere na ntugharị. Ihe mgbaru ọsọ gị negwuregwu ahụ bụ ịbịpụta bọọlụ ndị...
Wizard Wars bụ egwuregwu nka na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Enwere m ike ịsị na akụkụ kachasị mkpa nke egwuregwu ahụ bụ na ọ na-enye gị ohere isoro enyi gị gwuo egwu maka abụọ offline. Nezie, e nwere ọtụtụ egwuregwu ọtụtụ ndị nwere ike igwu na mobile ngwaọrụ. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ ị nweghị...
Ninja: Nsogbu nke Shadows bụ egwuregwu ịgba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ maka ndị egwuregwu nọ nafọ niile, site na asaa ruo iri asaa. Ninja: Clash of Shadows, egwuregwu ninja nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na smartphones na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, bụ akụkọ banyere ninja nke chere ọdịnihu ya ihu. Dị ka e...
Egwuregwu na-agaghị ekwe omume bụ egwuregwu na-atọ ụtọ na ụdị egwuregwu Arcade, bụ nke e wepụtara na nsụgharị gam akporo mgbe ọ nwesịrị nnukwu ihe ịga nke ọma na Ụlọ Ahịa Apple, na ụdị iPhone na iPad na-ewu ewu na obere oge. Ebumnuche gị na egwuregwu agaghị ekwe omume, nke bụ egwuregwu nka, bụ imezu ọkwa ahụ site na ịgafe square ị...
Tap Battle bụ egwuregwu dị mfe ma na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Enwere m ike ịsị na ọ bụ egwuregwu na-egosi na egwuregwu ekwesịghị inwe eserese dị elu na ihe na-adaba agba ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ ma na-egwu egwu. Karịsịa na ngwaọrụ mkpanaka, ọnụ ọgụgụ egwuregwu enwere ike ịme na-enweghị...
Gravity Guy bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Na Gravity Guy, egwuregwu dị ka Jetpack Joyride, ị na-achịkwa dike ahụ kwụ ọtọ wee gbaa ọsọ. Nime egwuregwu ahụ, nke dịkwa ka Jetpack Joyride, ị na-egwu dị ka agwa nke bi nụwa ebe a na-emebi iwu nke ike ndọda ma na-ejide ya nagha maka imebi iwu, ma...
Buzzer Arena bụ ngwugwu egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ nwere ọtụtụ obere egwuregwu ị nwere ike igwu naanị gị ma ọ bụ gị na ndị enyi ndị ọzọ. Enwere m ike ịsị na akụkụ kachasị mkpa nke Buzzer Arena bụ na ọ na-enye ohere ka mmadụ 4 na-egwu egwuregwu ọnụ na otu ngwaọrụ. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike...
Toss akwụkwọ, onye egwuregwu ya gara aga bụ nke ama ama nke ukwuu, jiri egwuregwu nke abụọ pụta ọzọ. Niwebata ọrụ anyị na-agbalị ịtụfu site na ịpịa akwụkwọ nụlọ, nebe ọrụ ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ, na ụwa egwuregwu, Backflip yiri ka ọ nweela ihe ịga nke ọma nime egwuregwu nke abụọ ahụ ruru nde mmadụ. Toss akwụkwọ 2.0 bụ ụdị egwuregwu gara aga...
Commander Genius bụ egwuregwu nka ochie ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Egwuregwu Commander Keen, nke ga-echeta karịsịa site na ụmụaka nke nineties, dị ugbu a na ngwaọrụ gam akporo gị. Anyị buru ụzọ banye nụwa egwuregwu na arcades, ma na nineties, mgbe kọmputa ka na-amalite ịpụta, egwuregwu kọmputa malitere...
Duck Hunter bụ otu nime egwuregwu kacha ewu ewu na iri itoolu. Noge gara aga, anyị niile nwere ụlọ ịgba egwu nụlọ na otu nime egwuregwu ndị a kacha egwuri egwu bụ Duck Hunter. Nezie, m na-eche na ọ dịghị onye na-adịghị ewe iwe site na nkịta nke snickered. Egwuregwu a na-atọ ụtọ, ebe ịchọrọ egbe egwuregwu ụmụaka, dị ugbu a na ngwaọrụ gam...
Dinosty bụ ụdị retro na-adịghị agwụ agwụ nke na-echetara egwuregwu kpochapụrụ anyị na-egwuri na 90s na ekwentị dị ka Nokia 3310 ma ọ bụ ebe a na-eji aka dị ka Brick Game. Dinosty, egwuregwu dinosaur nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, bụ maka akụkọ T-Rex. Ọ bụ ezie...
Run Bird Run bụ egwuregwu nka nefu nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Ketchapp mebere ya, egwuregwu a nwere akụrụngwa na-eri ahụ mana dị mfe dịka na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Isi ọrụ anyị na egwuregwu ahụ bụ ịgbanarị igbe ndị na-ada nelu wee gaa nihu nụzọ dị otú a iji nweta ọtụtụ isi dị ka o kwere mee. Nke a adịghị mfe...
Grey Cubes bụ egwuregwu dị elu nke anyị nwere ike igwu na mbadamba ihe na ekwentị anyị nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Anyị nwere ike igwu egwuregwu ahụ, nke na-enye echiche nke egwuregwu ịgbaji brik na-ewu ewu nụzọ dị iche, kpamkpam nefu. Neziokwu, nagbanyeghị na ọ nwere àgwà dị elu dị otú ahụ, a na-enye ya nefu. Ebumnuche anyị bụ isi...
NOON bụ egwuregwu na-atọ ụtọ ma na-ama aka nke anyị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Nime egwuregwu efu a kpamkpam, anyị na-agbalị ịkwụsị clocks na ihuenyo site na ịpị ihuenyo na ebe a kapịrị ọnụ. Anyị anabataghị ịdọ aka ná ntị nke onye nrụpụta, atụbala ngwaọrụ gị na mgbidi, nke ukwuu na mbụ, mana ka anyị na-egwu egwu, anyị...
Catapult Saga HD bụ otu nime egwuregwu egwuregwu nwere eserese mara mma. Ndị na-ege ntị bụ ndị na-achọsi ike maka ụdị egwuregwu a kemgbe ogologo oge na-akpọ ya. Ị ga-ahụ onwe gị na egwuregwu na-atọ ụtọ na egwuregwu a nwere atụmatụ ndị na-eri ahụ. Catapult Saga HD, nke ị nwere ike igwu egwu na ekwentị Android ma ọ bụ mbadamba gị, nwere...
Swinging Stupendo bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Egwuregwu a na-atọ ụtọ, nke ewepụtara na mbụ maka ngwaọrụ iOS, dị ugbu a maka ndị nwe Android igwu egwu na ekwentị ha. Ị na-egwu acrobat na egwuregwu ahụ ma ị na-agbalị igosi ndị mmadụ ihe ngosi site na ịme ihe dị ize ndụ. Nezie, ị ga-agbalịsi...
Bamba bụ egwuregwu nka mbụ anyị nwere ike igwu na mbadamba Android na ekwentị anyị. Na Bamba, nke pụtara na ndị na-asọmpi ya notu ụdị ya na nhazi ya pụrụ iche, anyị na-ahụ maka njikwa nke acrobat na-agbalị imeziwanye nelu ikpo okwu dị ize ndụ na eriri gbatịa. Igwe physics dị elu gụnyere nime egwuregwu ahụ, injin physics a na-ewekwa oke...
Ịkụ azụ na-atọ ọchị bụ egwuregwu nka na-atọ ụtọ nke ukwuu nke anyị nwere ike igwu na mbadamba Android na smartphones anyị. Ebumnobi anyị na egwuregwu a, nke na-adọta uche na eserese ya na-adọrọ mmasị, bụ ịchụ nta azụ. Bill, bụ́ nwoke ngafe ya jupụtara nihe omimi, na-agbasi mbọ ike nịkụ azụ̀ ma kpebie ibi ndụ fọdụrụnụ nebe a na-akụ azụ̀...
Ọ bụrụ na-amasị gị igwu obere egwuregwu na-atọ ụtọ, ejiri m naka na ị ga-ahụ egwuregwu nka akpọrọ Rain of Dots nanya. Ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị na-eji ekwentị mkpanaaka na-ahọrọ igwu obere egwuregwu na-atọ ụtọ. Ndị mmepe ahụ anọgidewokwa na-eme nke a ma tinyekwuo uche na ụdị egwuregwu ndị a. Negwuregwu Dot Rain, ihe mgbaru ọsọ gị bụ...
Wonderball Heroes bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Anyị niile maara akụkọ ifo ụmụaka Alice na Wonderland, onye aha mbụ ya bụ Alice na Wonderland. Ọ bụrụ nicheta, enwere oke bekee na-acha ọcha na akụkọ ifo Alice na Wonderland. Yabụ ihe mgbaru ọsọ gị negwuregwu a bụ ime ka oke bekee na-acha ọcha...
Ọ bụrụ na-amasị gị igwu obere egwuregwu na-atọ ụtọ na ekwentị gị, ị ga-ahụ nanya Nọrọ na egwuregwu ụlọ. Ị nwere ike nweta akara dị elu site na igbochi bọọlụ dị netiti ihuenyo ka ọ pụta na gburugburu gburugburu ya. Ịkwesịrị idowe bọọlụ a nokirikiri ogologo oge ị nwere ike site na iji akụ aka nri na aka ekpe na ala okirikiri iji duzie...
Egwuregwu Recep İvedik bụ egwuregwu ịgba ọsọ na-enweghị ngwụcha nke na-agbanwe agwa ọchị nke sinima Recep İvedik ka ọ bụrụ dike egwuregwu. Negwuregwu Recep İvedik, nke bụ egwuregwu ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ekwentị gị na mbadamba site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, Recep İvedik na-agba ehihie na abalị nekwughị ihe ọ bụla....
Egwuregwu kachasị sie ike mgbe ọ bụla 2 bụ ngwugwu egwuregwu na-atọ ụtọ nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Egwuregwu ahụ, nke na-adọrọ mmasị na aha ya na-adọrọ mmasị, na-ekwu na ọ bụ egwuregwu kachasị sie ike nụwa, ma ọ bụ ezie na obere egwuregwu na-esiri ike, ọ gaghị ekwe omume. Enwere m ike ịsị na eserese...
Archer Diaries bụ egwuregwu ịgba ụta nke ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Ọ bụ ezie na ịgba ụta bụ nezie egwuregwu, ọ pụkwara ịbụ ihe na-atọ ụtọ ma na-ewe oge. Archer Diaries bụ ngwa emepụtara maka ntụrụndụ karịa egwuregwu. Enwere ọtụtụ egwuregwu nwere egwuregwu ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo gị. Mana...
iHezarfen bụ egwuregwu na-agba ọsọ mobile na-adịghị agwụ agwụ banyere akụkọ banyere Hezarfen Çelebi, aha dị mkpa na akụkọ ntolite Turkey. Hezarfen Ahmet Çelebi, ọkà mmụta Turkey nke dịrị ndụ na narị afọ nke 17, bụ dike nke gbadara nakụkọ ihe mere eme nke ụwa. Hezarfen Ahmet Çelebi, onye dịrị ndụ nagbata afọ 1609 na 1640, tinyere ndụ ya...
Bọọlụ Circle bụ egwuregwu gam akporo gam akporo nke na-aga nke ọma, na-atọ ụtọ, na-atọ ụtọ ma na-eri ahụ nụdị egwuregwu nka ama ama na 2014. Ebumnuche gị negwuregwu ahụ bụ idobe bọọlụ ị ga-ejikwa na okirikiri ekele maka efere na-atụgharị na nsọtụ okirikiri ahụ. Ka isi ihe ị na-anakọta, ka ị nwere ike melite ndekọ gị. Ekele maka efere...
Onye na-eme ihe ọṅụṅụ bụ egwuregwu ntụrụndụ gam akporo ebe ị nwere ike ịga ụlọ ahịa ihe ọṅụṅụ wee kwadebe ihe ọṅụṅụ nke gị. Ị nwere ike ịme ọtụtụ ihe ọṅụṅụ na-ewu ewu na egwuregwu, nke na-enye ohere ịhọrọ otu nime oyi ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ na-ekpo ọkụ. Onye na-aṅụ ihe ọṅụṅụ, nke a kọwara dị ka egwuregwu nkwadebe ihe ọṅụṅụ, na-enye gị ohere...
Cleanvaders Arcade bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na ngwaọrụ gam akporo gị. Eji m naka na ị ga-enwe oge obi ụtọ na egwuregwu ahụ, nke dị mfe ịchịkwa ma nwee eserese na-atọ ụtọ. Ọrụ gị na egwuregwu ahụ bụ ịgagharị gburugburu ụwa wee nakọta ọtụtụ ihe e kere eke dị ka i nwere ike. Ya mere, ị na-egbochi ha imetọ mbara ala...
Ezinụlọ obere Galaxy bụ egwuregwu nka ị nwere ike ibudata ma kpọọ na ngwaọrụ gam akporo gị. Enwere m ike ịsị na egwuregwu a mara mma, ebe ị ga-amalite njem gafee ụyọkọ kpakpando, na-adọta uche na nhazi mbụ ya na-adọrọ mmasị na ụdị egwuregwu. Enwere m ike ịsị na mgbe physics ezi uche dị na ya na-atọ ụtọ, eserese 3D, mmetụta ụda obi ụtọ...
Ọ bụrụ na ị na-achọ nkà egwuregwu na-eri ahụ nke ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gam akporo gị, ana m atụ aro ka ị gbalịa Nye ya. Ọ bụ ezie na ọ dị nazụ ndị asọmpi ya na ụfọdụ ọzụzụ, mgbe anyị na-ele ya anya nozuzu ya, egwuregwu ahụ na-aghọ nhọrọ na-atọ ụtọ nke a ga-egwu iji nọrọ oge efu. Na egwuregwu, anyị na-agbalị iru ihe mgbaru ọsọ yiri...
Hypher pụtara dị ka egwuregwu nka siri ike nke anyị nwere ike igwu kpamkpam nefu na ngwaọrụ gam akporo anyị. Naanị ihe mgbaru ọsọ anyị na Hypher, nke na-enye usoro egwuregwu nke nwere mmetụta na-ahụ anya na-adọrọ adọrọ nagbanyeghị ikuku dị ntakịrị, bụ ịga njem ruo ogologo oge na-enweghị ịkụ ihe mgbochi na iji nweta akara kacha elu....
Enwere ike ịkpọ TwinDots nụzọ dị mfe; ma ọ bụ a mobile nkà egwuregwu ebe ọ bụ nnọọ ike irite elu scores. İkizDotta, egwuregwu mkpanaka ị nwere ike ibudata ma kpọọ nefu na smartphones na mbadamba gị site na iji sistemụ arụmọrụ gam akporo, bụ egwuregwu na-anwale echiche gị na otu ị ga-esi mee mkpebi ngwa ngwa. Nụzọ bụ isi, a na-eziga bọọlụ...
Egwuregwu 2 ntụpọ bụ otu nime nhọrọ efu nke ndị na-amasị ịme egwuregwu reflex na nke mara mma na ekwentị Android na mbadamba. Egwuregwu ahụ, nke na-enyere gị aka inwe oge dị mma, nwere ike ọbụna na-eri ahụ na nhazi ya nke nwere ike ịghọta noge dị mkpirikpi na ụdị egwuregwu na-esiwanye ike ma na-esiri gị ike ka ị na-aga nihu. Ebumnuche...
City Run 3D bụ otu nime ndị nnọchi anya kacha ọhụrụ nke egwuregwu ịgba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ, otu nime ụdị egwuregwu kachasị amasị nke nyiwe ekwentị: Negwuregwu a, nke anyị nwere ike ibudata kpamkpam na mbadamba Android na smartphones nefu, ị na-ejikwa robot nwere a. Àgwà nke ịgba ọsọ nokporo ụzọ obodo dị ize ndụ ma na-aga ebe o kwere...
Ọ bụrụ na ị na-enwe mmasị igwu egwuregwu nka dabere na nguzozi, ana m akwado gị ka ịnwale Roller Ball 3D. Na egwuregwu a, nke a na-enye nefu na ngwaọrụ gam akporo, anyị na-agbalị ịnyagharịa na nyiwe ndị siri ike site nịchịkwa bọọlụ anyị wee mezue ọkwa nke ọma. Ọ bụ ezie na ọ nwere ike ịdị ka ọrụ dị mfe, ozugbo anyị malitere egwuregwu...
Naughty Kitties bụ egwuregwu nka na-atọ ụtọ nke anyị nwere ike ibudata nefu na mbadamba Android na smartphones anyị. Anyị emewo ọtụtụ egwuregwu nka, mana ole na ole nime egwuregwu ndị a na-abịaru nso na ahụmịhe nke Naughty Kitties nyere. Na Naughty Kitties, nke na-ejikọta ike nke egwuregwu ịgba ọsọ na-adịghị agwụ agwụ na ikuku nke...
Nbudata ngwa Seskit, nke bụ mgbakwunye ọhụrụ na ngwa e-book audio nke na-emebi mbibi nụbọchị ikpeazụ, na-aga nihu na-ekesa nefu. Ngwa Seskit, nke emepụtara nke ọma maka ndị na-eji ekwentị gam akporo na ndị ọrụ mbadamba, na-anabata ihe karịrị puku ndị ọrụ 50,000 taa. Mmepụta nke na-aga nke ọma, nke na-eme ka afọ ju ndị ọrụ ya site na...
Ọ bụrụ nịchọrọ inwe oge obi ụtọ na ekwentị gam akporo gị na mbadamba, ngwa ị na-achọ bụ Audioteka. Audioteka ngwa nbudata, nke na-akwado akwụkwọ ọdịyo dị iche iche nefu, na-enye ndị ọrụ ya ohere ige ntị nakwụkwọ e-akwụkwọ ọdịyo dị iche iche na ụzọ ụgbọ oloko, na metrobus, na okporo ụzọ ma ọ bụ mgbe ha na-eme egwuregwu. Ngwa Audioteka,...